Chaizvoizvo pane gwenzi rejasi rakanyunguduka gorosi kana kuti tsvuku (kubva kune chiedza kusvika mumvuri shades) michero. Hazvishamisi kuona pamatavi awo michero yemuvara wakasiyana, asi kune marudzi akadaro. Muchikamu chino iwe uchazivana nejasi "Russian yellow", ayo ma berries akatsvaga akawanda.
Gooseberries "Russian yellow" - tsanangudzo yemhando dzakasiyana-siyana
Izvi zvakasiyana-siyana zvakavhurwa nevarimi kubva kumarudzi akadaro e shrub sa Kareless, Curry, Oregon, Shtammovy naHoorton. Izvi zvakasiyana-siyana zvinorega kuvhuvhuta uye kusanaya zvakanaka, saka zvinogona kukurudzirwa zvose mumabhanhire epakati uye munzvimbo dzinodziya. Zviratidzo zvaro zvakasimba zvakasimbiswa mukati mekuberekwa uye kukwirira kwakasimba ku powdery mildew (kune dzimwe zvirwere - pakati).
Gooseberry "Russian yellow" sredneraskidisty kwete gorosi rakasvibira rinosvika kure. Mitsva yakasviba yakasviba kune avo vatove vaine lignified. Mashizha matsvuku ane pink inopeterera kuguma. Pamatavi akare pane kune imwe chete, mid-size size spines, inowanikwa kakawanda mumucheto wezasi wepfudzi iri pasi pechipfu.
Inoputika iyi jirasi yakasvibirira-yakakura maruva pa 1-2 zvidimbu pamubhedha. Somugumisiro wezvokuzvitsvaira, huru (4-6 g) michero yakafanana nemasikari inokura kubva kwavari. Mushure mokukura, vanowana ruvara rwakatsvuka. Havana ganda rakaoma kwazvo rine mishonga yakawanda yemakwenzi uye kupfeka wax. Majikiri ane ruvara runotapira uye ruvara uye dzimwe mbeu. Mushure mokukura, vanogara kwenguva yakareba pamatavi, kwete kupisa. Iri jira rinogona kushandiswa pakugadzirisa uye kudyiwa patsva.
Iko kukohwa kwakanaka kweiyoji yekushambadzira mukati mekutanga makore gumi nemashanu. Paunenge uchikura, unofanirwa kuziva kuti munguva yehutachiva kumativi ose musango mutsva kunokosha kuvaka mashizha emapazi kana kuvasunga.
Kugadziriswa shwiberi - zvakanakisisa zvakasiyana
Tomato "The Black Prince"
Celery - kukura, mitemo inokosha uye zvikamu
Kurwisana neiiiii inobhururuka mishonga yevanhu
Tomato yakatsvuka - marudzi
Nzira yekudyara kabichi muvhu rakazaruka - zvakavanzika zvekuyamwisa nekukura
Zvirwere zveApplants uye kurwisana navo
Pyriv - sei kubvisa?
Peat mahwendefa emichero
Imba duku kune tsime
Kurwisa hove pamusoro pemaruva
Chirevo senzira yekufunga
Kaya Gerber akapemberera kusunungurwa kwe "mafuta" ekutanga nemukoma wake munharaunda yevamwe shamwari
Pasina nguva mimhanzi yakaridzwa: Sofia Vergara haasarambi kugara nemurume wake!
Nguo dzinofanira kuva
Zviratidzo zvevanhu zvekukohwa
Nguruve yakavhara muchoto
Chitubu chakanyanya chemukomana - mutsva mutsva uye kungosununguka demisezonki kumwana
Zuva rekuberekwa rinopa kune waunoshanda navo
Idzo dzinoberekerwa zvikuru dzembwa
Kurema uye kuyerwa kweKate Middleton
Bhogi tsvuku - ndeapi mitero iripo uye chii chaunofanira kupfeka?
Icon yaSt. Seraphim weSarov - zvinoreva, chii chinobatsira?
Ndeipi iri nani - skateboard kana bhendi bhodhi?
Chokoti kamuti - ndiyo yakanakisisa mapepa ekuzadza zvinotapira chero kupi zvako kuyananisa
Fashionable dress styles
Zvigadzirwa zvekushongedza tights